Amathayili ekwakhiweni - ukuklama nokubeka okukhethiwe, phansi nangodonga
Amathayili emgodini - amathayili nodonga phansi, imibono kanye nezinketho zokuklama
Amathayili ahlelekile emgodini - indlela enhle kakhulu yokuklama phansi noma izindonga kuleli kamelo elinzima. Ukugqoka okuhlobisa lapha kuncike ekwenzeni ukwanda komswakama, uthuli, ukungcola, ukuqhuma komshini. Uma ukhetha izinto zokuqeda, udinga ukunaka kokubili izici nobuhle bayo.
Ukuqedela umzila ngamateyili
Emagcekeni nasemigwaqweni, phansi kuphelile kakhulu, izindonga neminyango kungcolile. Udaka lomgwaqo luhlala lulethwa lapha ngezithende, ngokunyakaza okunamandla, uhlaka lokuhlobisa phansi lukhishwa masinyane. Ukusheshisa izinqubo ezimbi zokuhlanzwa njalo ngokusetshenziswa kwe-detergents, enomthelela obhubhisa phezulu. Amathayili e-Ceramic emgodini - ukukhetha okuhle, okuzosiza ukuxazulula izinkinga eziningi ezisanda kuvela ezifuywayo.
Izinzuzo zokusebenzisa amathayili emgodini:
Ukukhethwa kwemidwebo enkulu kukuvumela ukuthi udale ama-panel ahlukahlukene avela amathrekhi okuhlobisa emgodini, imihlobiso ehlukene kanye nezinye izinhlanganisela zangempela.
I-Ceramics ne-porcelain stoneware yindawo ehlala njalo futhi ehlala njalo.
Ama-tile amahle nemisindo emgodini ubekezelela umswakama ophezulu futhi amelane nemiphumela ye-detergents.
Ebusweni obushelelezi, ukungcola kuqoqa kancane futhi kulula ukuwahlanza.
Ukubeka amathayili emgodini, uthola ukugqoka okungenakuvutha umlilo kanye ne-eco-friendly.
Lezi zinto azilimazi isikhunta nezinambuzane eziyingozi.
Amathrekhi emgodini enezindwangu eziyinkimbinkimbi angabuyiselwa, ashintshwe izakhi ezimele noma izindawo zonke ekubunjweni.
Izitayela zendawo emgodini
Kukhona ukukhethwa okukhulu kwezingubo zobucwebe ezinezinhlobonhlobo zemidwebo nemibala, izinkomba zamandla. Abantu abangenalwazi bavame ukulalela kuphela ukuklanywa kwempahla kanye nezindleko, ngaphandle kokufunda izici zayo zepasipoti, benze amaphutha lapho uthenga, okuphazamisa ngokushesha ukusebenza kwesembozo sephansi. Amathayili anamuhla emgodini phambi komnyango wendlu futhi phansi kwegumbi kufanele abe oqinile, ephephile futhi ahlangabezane nazo zonke izidingo ezijwayelekile zanamuhla.
Izici eziyinhloko zetayipi eliphansi phansi:
Thenga amakhemikhali ngokuqina kwamagumbi ngamandla emaphakathi nephezulu aphezulu (isigaba esivela ku-PEI 3 nangaphezulu).
Amathayili emgodini kufanele abe nokumunwa kwamanzi kuze kufike ku-3%.
Kuphansi kungcono ukuthenga izinto nge-coefficient ephephile ye-friction ye-0.75% (islayidi esincane).
Umkhiqizi - imikhiqizo engcono kakhulu eyenziwa e-Italy naseSpain, izinto eziqedile zasePoland naseTurkey zenziwa ngekhwalithi enhle.
Amathremu e-wall for the corridor
I-Ceramics noma i-porcelain stoneware ayifuni ukuhlobisa udonga lonke ekamelweni, ngokuvamile inqwaba emgodini isetshenziselwa ukuhlanganiswa nezinye izinto zokuqeda - i- plaster elula ne- Venetian , imidwebo, izitini, itshe. Isixazululo esinengqondo ukusebenzisa amathayili ukuhlobisa ingxenye engezansi yesikhala, esibhekene nokuningi kokungcola, ama-paws ezilwane ezifuywayo, kuncike njalo ekuhlanzeni okumanzi.
Ukubeka amathrekhi emgodini ezindongeni kunezinzuzo eziningi, kodwa kunezimo ezithile ezikule ndlela yokuhlobisa isimo. Kuzodingeka uqaphelisise ukulinganisa ubuso obunzima, ukwenza i-screed yekhwalithi. I-ceramics yesibili engalungile inezici eziphansi zokugcoba ezishisayo, ngakho ukuthinta izindonga ezibandayo kuzobangela ukungakhululeki.
Izinketho zeTile emgodini
Uma uklama imigodi, kubalulekile ukuthi ubukhulu be-tile, kanye nokuklama kwayo. Sibheka kakhulu ukubhekwa kwamakamelo amancane namancane, lapha noma yikuphi iphutha kuholela ekuguqulweni kwekamelo kube emhubheni omnyama noma ongenakonakala. Amathayili amahle phansi emgodini noma ezindongeni akufanele athukuthele umbono womuntu, unciphise isikhala, enze izinto zingaphakathi. Ungakhohlwa mayelana nokusebenza kokumboza phansi noma odongeni, emnyango, lapho indawo engcolile khona, ukubeka ngeso lengqondo indaba yomthunzi omnyama.
Okuhlukahlukene kwemibono yokuhlobisa izindonga emgodini ngamateyili:
Amathrekhi ekwenzeni enkulu yefomethi afaka amehlo ngokucacile ekamelweni.
Ngokubekwa kwezingqimba, izindonga zibhekwa ngokubonakalayo ezinhlangothini.
Esikhathini sesitayela se-classical, izinto ezigqamile zisetshenziselwa ingxenye engaphezulu yezindonga, futhi phansi kwenziwa imibala emnyama.
Umklamo oqhakazile futhi othakazelisayo ngesitayela semvelo ungatholakala uma usebenzisa izitshalo zobumba, umbala we-beige noma umuthi, izinto eziphathekayo emaphethini olwandle.
Amafomu wesitayela saseMpumalanga kufanele athenge amathayili emgodini ngokuhlobisa, izinyoni ezincane, ama-hieroglyphs, amapiramidi. Lolu khetho lufanelekile emikhaneni evulekile, lapho izindonga ezinemibala ekhanyayo necebile zibukeka zinenzuzo, futhi ziqedile ngama-golden and turquoise hues.
Amatayela amhlophe emgodini
Abantu abangenalwazi balubheka ukuthi lo mbala unzima futhi awujabulisi, kodwa ngendlela enhle, umklamo ompunga we-corridor nge tile phansi uzoba isisombululo esisha futhi esiwusizo. Uma ufuna ukwakha imvelo yebhizinisi, sebenzisa inhlanganisela ebandayo ekugcineni, ukufakela okufudumele kwenza ingaphakathi lihle futhi lihlonipheke. Izansi kufanele zivelele ngokumelene nesizinda esiphezulu sezindonga kusuka ezindongeni nasefenisha, ngakho-ke sebenzisa izinto nge-hue ehlukile. Ukubukeka okuhle kakhulu ukugqoka okuluhlaza okwesitayela saseScandinavia, isiqondiso samanje esiphezulu se-high-tech, ubuchwepheshe besimanje, isakhiwo esiqinile esiyingqayizivele.
Amathayili amhlophe emgodini
Izindebe eziningi zigwema ukuphela komhlophe, futhi zicabangela isisombululo esincane, kodwa ukukhanya kwe-tile emgodini kunezinzuzo ezibonakalayo. Umhlobiso omhlophe weqhwa ufihle izigameko ezakhayo ku-geometry of space, kwenza ikamelo elide elikhazimulayo likhanyise futhi livuleke, lo mbala uyisizinda esihle kakhulu sefenisha nokuhlobisa. Izilungiselelo ezihlukahlukene zezinyosi ziyozenezwa ekutheni izitini ezimhlophe zihlanganiswe namathisi amnyama nambala, ukusetshenziswa kwezingaphakathi zokuhlobisa, ikhefu noma iphaneli lezingubo zokugqoka endaweni yangaphakathi emhlophe.
Amathayili amnyama namhlophe emgodini
Inhlanganisela ye-chess esezansi yamatayela amnyama namhlophe iyisisombululo somhlaba wonke, esizuzisa noma yisiphi isitayela. Lolu khetho lulula ekusebenzeni futhi lwandise isikhala, lubukeke lunhle. Leli tile emgodini efulethini lizobheka okuthakazelisayo uma ingaphakathi lisebenzisa amashalofu amasha, amakhanda, izihlalo. Uma ama-aisles ebanzi, ungafaka ifenisha ephakanyisiwe nge-strip black and white upholstery. Zama ukunamathela kumthetho oyinhloko - omncane umgudu, ngaphezulu ekamelweni udinga ukusebenzisa izinto ezikhanyayo namathayili amancane amnyama.
I-tile e-Brown emgodini
Ama-brown shades awahambisani nhlobo, asemvelo futhi asemvelo, afanelekile kunoma yisiphi isitayela. Amathayili amnyama emgodini onobumba obunamathelisi enza kancane igumbi libonakale, kungcono ukusebenzisa ukuphela okuqhakazile ngomphumela wokucabangela ongatholi amandla abantu abaningi. I-Brown phansi ihlangene kahle ne-caramel, ephuzi, ukhilimu, i-grey, igolide, umbala obomvu wezindonga. Emgodini ovulekile, ungasebenzisa ngokuphepha izithombe ezicebile zalo mbala - ushokoledi, i-cognac, emnyama.
Okukhethwa kukho kwe-tile okudumile kumgudu:
Amathayili aluhlaza okhuni.
Amathrekhi anesibhakabhaka asobukhulu be-shades ehlukene.
Ekupheleni kwe-Brown ngaphansi kwetshe, isitini noma insimbi.
Amathayili we-beige emgodini
Ukuphela kwe-beige kubonakala kuyithakazelisayo futhi kuhlukile phakathi nosuku, umthunzi wayo uhluka kusuka ensundu kuya kokhilimu kuye ngokuthi ukukhanya. Inhlanganisela enhle - emhlabathini obomvu omnyama ngokuthungwa kwezinkuni namadonga ensimbi. Akukwahle ukuba udonga ngokuphelele izindonga ngaleli gumbi ekamelweni elikhulu, kungcono ukuhlaziya isimo nge-mosaic, amapaneli, nezinye izinto zokuhlobisa. Umklamo we-tile emgodini umbala owenziwe kahle we-beige ofanelekile wokugubungela phansi egumbini elincanyana, elihlangene elinezindonga ezihlotshiswe ngombala omnyama, i-peach, u-emerald noma umbala ophuzi wegolide.
I-Mirror ithayela emgodini
Izinto zokuhlobisa ezibonakalayo ziguqula kakhulu umbono wesikhala futhi zijwayele ukusetshenziswa emakamelweni amancane. Zisetshenziselwa ukuhlobisa izindonga emikhawulweni, kufaka lapha izibuko ezinkulu zendabuko emafolini, ngaphandle kokuthatha isikhala esiyigugu. Ukwakhiwa kwamatayela emgodini omncane nomphumela wesibuko kungahluka kakhulu nobuchwepheshe bokukhiqizwa kwawo.
Izinhlobonhlobo zezibuko zithinta emgodini:
Isibuko esibucayi se-corridor emaphethelweni abushelelezi ngaphandle kwamajoyini aqaphele esitokisini.
Ukulingisa kwesikrini sesibindi sensimbi - ithreyili ye-bronze epholile, igolide, isiliva, i-chrome.
I-Mirror tile emgodini nge-toning.
I-Mirror ithinta iphethini yokuhlenga.
I-Mirror tiles ene-front-textured front surface.
Tile ngezinkuni emgodini
I-tile yokuhlobisa isitayela emgodini ngaphansi kwesihlahla ingasetshenziswa phansi, ilandele i-parquet, ibhodi noma i-laminate. Kuzofaneleka esimisweni sokudala, izwe noma i- provence , njengengxenye yezinkuni zemvelo. Emahholo avulekile i-granite ye-ceramic noma i-ceramics ye-oki noma olunye uhlobo olubi olubukeka lubiza kakhulu futhi luhle kakhulu. Izinto eziqinile zokugcina izinkuni zokhuni futhi eziphakeme zizophakama emithwalweni yansuku zonke egumbini elinomgwaqo ophezulu, futhi ukhulume ngomunwe omuhle womnikazi.
I-marble tile emgodini
I-marble yemvelo ibukeka ibe nenhle, isitayela futhi iyabiza endaweni, kodwa ayikwenzi kahle kuma-reagents amakhemikhali, ngokushesha ithatha ukungcola ngendawo ebandayo futhi inezindleko eziphezulu. I-ceramics zanamuhla zilingisa noma yiliphi idwala letshe lasendle futhi alinayo izibizo ezibalwe. Amathayili emgodini omude ngaphansi kwe-marble ikuvumela ukuthi uhlobise phansi kanye nezindonga, ungazenzeli kahle ukudala izinto ezibukeka kahle, ukukopisha ngokucophelela ukuthungwa nokuhlakanipha kwalokhu okuyingqayizivele.
Tile ngezitini emgodini
Izindonga zezitini ezigqamile zithandwa izitayela eziningi, kodwa akucebisi ukuhlobisa ukhonkolo noma i-plasterboard nalokhu okuqukethwe ngezinhloso zokuhlobisa. Esikhathini esakhiwe njalo kuvame ukusetshenziswa amatayela wezitini , ehlanganiswe ne-glaze nge-matte relief, okuyinto ephinda ngokuphinda iphethini lobuciko. I-porous, igcina kahle ukushisa, ukukhanya, imane igxile odongeni ngeglue. Ukunquma ukuthi yiziphi tile ozikhethayo emgodini, udinga ukucabangela isitayela sangaphakathi, kuye ngokuthi lokhu, ukhethe ukuklama nokubunjwa kwezingcwecwe.
Ngumuphi umdwebo okuyi-tile efanelwe yitini:
ngaphakathi phakathi kwezinhloso zobuhlanga.
I-tile patchwork emgodini
Umklamo we- patchwork uqobo futhi ushaya ngokushesha, uthanda abalandeli bendlela engavamile yokuklama ingaphakathi. Isembozo esingaphansi noma odongeni kulesi sitayela kufana ne-patchwork quilt, eqoqwe emininingwaneni enemibala eminingi. Amathayili phansi emgodini omncane we-patchwork usetshenziswa ezweni, ubuciko be-art, minimalism, iprovence, ukulungiselelwa kweScandinavia. Ngaphandle kokuqoqwa kwamaqoqo okwenziwe, ungakha amaphethini wokuqala we-patchwork ngokwakho usebenzisa amathayili avela kumaqembu ahlukene, ukuhlanganisa ngempumelelo amaphethini wejometri noma imihlobiso enemibala.
Izinhlobo zephepha lodonga zekhishi
Ukukhanyisa ekhishini ngesineke esilula
Amakhethini ngesitayela se-Provence
Hanger emgodini - izinketho zanamuhla ezisebenzayo
Ukubuyiselwa kwezihlalo ngezandla
Amashalofu e-Glass wezindlu zokugezela
Igumbi lokuhlala eliphezulu - ezemfihlo zemihlobiso yehholo lanamuhla
Umbala we-Tiffany ngaphakathi
Izibane zonyaka omusha efasiteleni ngesimo samakhandlela
Yakha umzila omncane - udlale nxazonke ngesikhala
Indlela yokufaka isicelo se-niche?
I-flooring enamanzi ephansi
Ngabe ngiyiphi ilanga abayilandela emva kokuyeka?
Kungani izinyosi zinomuntu ohlukile?
Indlela yokuqamba inja?
Ukugqoka kanjani isikhala ngengubo?
I-Heater for aquarium ne-thermoregulator
Izicathulo zesitayela sezempi
Amapaki amanzi eMoscow naseMoscow esifundeni
Ukushayela epanini lokuthosa - ukupheka okusheshayo kwezimpahla ezimnandi zasekhaya ezibhaka
I-Ranitidine noma i-Omez - yimuphi okungcono?
Ukugeza ekhaleni nge-soda nosawoti
Ikati liboya kakhulu
Ukugqoka izingubo zokugqoka
I-Eye yehla uLecrolin
Amapaki Abesifazane - I-Autumn-Winter 2015-2016
Esterhazy ekhaya - odokotela
Inhloko yabesifazane emva kweminyaka engu-50 ubudala
I-Bijouterie yoNyaka Omusha 2017
I-Buckingham Palace eLondon